Ifektri elihambayo, abahlinzeki - Abakhiqizi baseChina abajikelezayo
Ukuhambisa okususwayo kwenziwa ngengxenye yekhanda, umzimba wamathangi ophakathi, ingxenye yomsila, ikhebula elihambayo lokususa, idrayivu yokushayela kanye nogongolo lokufakwa kokulala. Isakhiwo esivaliwe ngokuphelele, akukho ukuvuza kwezinto ngesikhathi sokusebenza; elihambayo chain isebenzisa roller chain, single chain isakhiwo ifomu; ukungenisa nokuthekelisa okokusebenza, ubude bokuhambisa bungakhiwa kalula futhi buhlelwe ngokuvumelana nezidingo zenqubo.
Ububanzi be-LS type screw conveyor bungu-100 mm- Ubude obukhulu bomshini owodwa wesikulufa sokushayela bungafinyelela kuma-40m (ubukhulu obungaphezu kwama-30m). I-double drive isikulufa umshini usebenzisa isakhiwo shaft ephukile maphakathi, futhi ubude esiphezulu angafinyelela 80m (60m super enkulu).
SCG Isixwa elihambayo
I-SCG uchungechunge lwamabanga aphezulu okushisa okudlidlizelayo kwezinto ezisetshenziswa kakhulu lisetshenziswa kwezimayini, insimbi, izinto zokwakha, amalahle, imboni yamakhemikhali, okusanhlamvu, ezemithi nezinye izimboni. Izinga lokushisa lingaphansi kuka-300 ℃ kuzo zonke izinhlobo zempuphu, imbudumbudu, ibhulokhi kanye nengxube yazo.